युद्धको तयारीमा विप्लव, स्थानीय तह पहिलो निशानामा ! - Rahashya Khabar Online News Portal Rahashya Khabar Online News Portal
युद्धको तयारीमा विप्लव, स्थानीय तह पहिलो निशानामा !
प्रकाशित मिति: 20 November, 2020 3:04 pm
काठमाडौं, मङ्सिर ५ – सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूह सैन्य तालिममा संलग्‍न रहेको खुलेको छ । कोरोना महामारीको मौका छोपेर सो समूहले पूर्व र पश्चिम नेपालका विभिन्‍न जिल्लाका जंगलमा गोप्य सैनिक तालिम सञ्चालन भइरहेको खुलेको हो । सुरक्षा निकायलाई प्राप्त जानकारीअनुसार विप्लव समूहको जनमुक्ति सेनाको गण्डक ब्युरोअन्तर्गतको सैन्य तालिम सम्पन्‍न भएको छ ।